Goolhayaha Man City ee Ederson oo shaki laga galinayo inuu ciyaari doono kulanka Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 07 Nof 2019. Goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Ederson ayaa shaki laga galinayaa inuu ciyaari doono kulanka Axadda ay wajahayaan Liverpool, kaddib markii uu dhaawac soo gaalay kulankii xalay.
Ederson ayaa dhaawac muruqa ah uu soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii xalay ee Champions League oo ay barbaraha la galeen naadiga Atalanta.
Xiddiga reer Brazil ayaa la bedelay qeybtii hore kulankii ka dhacay garoonka San Siro kaddib markii uu dareemay xasilooni darro, markii lagu dhowaa qeybtii hore kulankii barbaro 1-1 ku dhammaaday xalay.
Isku soo wada duuboo bedelkiisa ayaa u muuqday mid uu macallin Pep u dhigaashanayey kulanka ugu weyn Premier League isbuuca soo socda ee Axadda ka dhici doona garoonka Anfield.
Waxaana hoggaamiyaha Man City taas bedelkeeda uu garoonka soo geliyey goolhayaha labaad ee Claudio Bravo, laakiin nasiib-darro isagana waxaa la tusay kaarka cas qeybtii dambe kulankii ka dhacay Milan, waxaana markale Macallin Pep Guardiola uu goolhaye ka dhigtay oo uu garoonka soo geliyey Kyle Walker.
Markii wax laga weydiiyey wax ku saabsan dhaawac goolhaye Ederson macallin Pep Guardiola ayaa yiri: “Waa dhibaato muruqa ah, ma wayna laakiin waxay ahayd halis.”
“Ma uusan dareemin deganaan sababtaas darteed waxaan go’aansannay inaan bedel ku sameyno.
“Daacadii, hadda ma ogi sida uu u xun yahay dhaawaciisa, waa nin xoog badan, waana isku dayi doonnaa inaan la kulanno isaga, laakiin halis ma gelin doono, waan arki doonnaa berrito.”
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in goolhayahan reer Brazil shaki laga galiyo kulanka adag ee Premier League oo ay Man City booqanayso garoonka Anfield.